कर्णालीका मन्त्रीलाई बलात्कारको बात : के–के भयो अहिलेसम्म ? | Ratopati
कर्णालीका मन्त्रीलाई बलात्कारको बात : के–के भयो अहिलेसम्म ?
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही विवादमा तानिएका छन् । हालै सार्वजनिक एउटा भिडियोका आधारमा उनीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । यद्यपि, पीडित भनिएकी महिलाले आफूमाथि त्यस्तो कुनै घटना नभएको भन्दै सफाइ दिएकी छिन् ।
कुर्मराज शाही एमालेबाट विद्रोह गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार नेतामध्ये एक हुन्, जसले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । पछिल्लो समय उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध छन् ।
पीडित भनिएकी महिला र उनका पतिले भने बाहिर हल्ला फैलाइएजस्तो कुनै घटना नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । मन्त्री शाहीले पनि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे आएका समाचारहरुको खण्डन गरेका छन् । उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा सत्यता नरहेको बताए ।
के हो भिडियो काण्ड ?
घटना दुई वर्षअघि (२०७६) को भनिएको छ । तर, भदौ ६ गतेमात्र भिडियो सार्वजनिक भएको छ । एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा यो प्रकरण सतहमा आएको हो । घटना भएको यति लामो समय गुज्रिसक्दा पनि घटनाबारे न प्रहरीमा उजुरी परेको छ, न त पीडित महिलाले नै आफू पीडित भएको स्वीकार गरेकी छन् । बरु उल्टै ती महिलाले यो प्रकरण प्रकाशमा आएपछि आफ्नो चरित्रहत्या भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
यो प्रकरण तात्दै गएर यसले अहिले राजनीतिक रुप लिएको छ । यही क्रममा सोमबार पीडित भनिएकी महिलाले पतिका साथ वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । तर, त्यसको केहीबेरमै ‘गुपचुप’ रहेको उक्त भिडियो सार्वजनिक भयो ।
सार्वजनिक भएको भिडियोमा पीडित भनिएकी महिला एउटा कोठामा सुरुमा एक्लै देखिन्छिन् र उनले नै मोबाइलमा भिडियो अन गरेर राखेको देखिन्छ । त्यो लगत्तै एक पुरुष ढोकाबाट भित्र आउँछन् र कोठाको बत्ती निभाउँछन् । त्यसपछि ती पुरुषले महिलासँग यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न खोज्छन् तर, महिला भने प्रतिकार गर्न खोज्छिन् । झण्डै साढे ६ मिनेटको भिडियो अहिले भाइरल बनिसकेको छ ।
श्रीमान–श्रीमतीको पत्रकार सम्मेलन
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा पीडित भनिएकी महिलाले आफू बलात्कृत नभएको बताएकी छन् । ती महिलाले भनिन्, ‘ममाथि कुनै बलात्कार भएको छैन । विभिन्न ढंगबाट बलात्कृत बनाएर पीडा दिने काम भएको छ । मलाई जुन विषयमा मन्त्री र मेरो नाम जोडेर बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको छ, त्यो सरासर गलत हो ।’
उनले आफूले यसबारे फेसबुकमा लेखेको प्रतिक्रिया दोहो¥याउँदै भनिन्, ‘मेरो व्यक्तिगत जीवनमा कसैले चरित्र हत्या गर्न खोज्छ भने म उसैको नाममा चिठी लेखेर मर्छु र सोही मिडिया जवाफदेही हुनेछ भनेर यस्तो समाचार आउने बित्तिकै लेखिसकेकी थिएँ ।’
उनले आफू पीडित भएको आफूलाई नै महसुस नभएको पनि बताइन् । ‘बिना कारण मलाई आज नखाएको विष लागेको छ । न म अन्यायमा छु, न त म बलात्कृत महिला हो । ममाथिको बलात्कारको विषय थियो भने मलाई किन सोधिएन ?’ उनले भनिन्, ‘अनुमति बिना अर्काको समाचार लेख्न पाइन्छ र ? पत्रकार र सामाजिक सञ्जालले जबरजस्ती बलात्कृत बनाउँदैछन् ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उनले निकै असहज महसुस गरेकी थिइन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीसँगै रहेका उनका पतिले पनि आफ्नी पत्नी मन्त्रीबाट पीडित नभएको बताए ।
सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा पीडित भनिएकी महिलाका पतिले एमालेले यस प्रकरणमा गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘हामी बुढाबुढी सुर्खेत कोठामै रहँदा रहँदै हामीलाई थाहा नदिई अन्याय परेको बनाएर आइतबार युवा संघ, अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन खेदजनक छ । हाम्रो ईज्जतलाई साधन बनाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको छ ।’
उनले भने, ‘मेरो श्रीमतीलाई गोटी बनाएर रिस साँध्न र राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको छ । कसैलाई समाचार लेख्न भनेर गुहारेको छैन । हामीले (मेरी श्रीमतीले) मलाई बलात्कार भएको छैनभन्दा अरुलाई किन टाउको दुख्यो ? मेरो श्रीमतीसँग कृषिमन्त्रीको अनैतिक सम्बन्ध भनेर जुन भिडियो बनाइएको छ, त्यो फेक हो, फर्जी हो । विश्वास नलागे त्यसलाई राम्रोसँग जाँच्दा हुन्छ ।’
उनले मन्त्री र आफ्नो श्रीमतीबीच बाबुछोरीको सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत गरे । श्रीमतीको चरित्र हत्या गरेर मन्त्रीको मानहानी गर्ने काम खेदजनक भएको टिप्पणी गर्दै उनले डिप्रेशनमा गएको परिवारलाई शान्ति सुरक्षाका साथ बाँच्न दिन र अब आगामी दिनमा त्यस्ता अफवाहका समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनआग्रह पनि गरेका छन् ।
घटनामा राजनीतिक गन्ध
कर्णालीको घटनाले अहिले राजनीतिक रुप लिएको देखिन्छ । भदौ ६ गते नै सञ्चार माध्यममा घटना सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मन्त्री शाहीको राजीनामा माग ग¥यो । विपक्षी एमालेले घटनालाई विशेष महत्व दियो । यतिमात्र नभई आफ्ना भ्रातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुलाई सडकमै उता&yen;यो । मन्त्री शाहीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै एमाले सडक संघर्षमा उत्रियो । उसले मन्त्री शाहीलाई बर्खास्तको माग ग¥यो र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विज्ञप्तिसमेत बुझायो ।
बलात्कार आरोपको घटना बाहिरिए लगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मन्त्री शाहीलाई बर्खास्त गर्न माग गरिसकेका थिए । ‘कर्णाली प्रदेशको गरिमा र सम्मानका लागि अबिलम्ब आरोपित मन्त्रीलाई बर्खास्त गरियोस्,’ कँडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ।
कँडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सरकार, सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दबाब दिँदै यसबारे ती दलको धारणा माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कर्णालीका माओवादीहरू र काँग्रेसहरूलाई के विषयले छुन्छ, बुझ्न सकिएन । प्रदेशमा माओवादी र काँग्रेसको संयुक्त सरकार छ । बहालवाला मन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा घटना विवरणसहित जुन संगीन आरोप लागेको छ, त्यसको आधारमा तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेमा न सरकार बोल्छ, न पार्टी बोल्छ, न पार्टीमा लागेका बोल्छन् ।’
कँडेलले अरूले बोल्दा ‘विरोधीले बोलेको’ अर्थ लगाइने गुनासोसमेत गरेका छन् । ‘पीडित पक्ष कुटिन्छ, प्रहरीले उद्धार गरेको भन्छ, मन्त्रीसँग जोडिएका व्यक्तिले भौतिक कारबाही गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा लेख्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘समाचार लेख्ने पत्रकारको भगाभागको अवस्था । प्रशासन छ तर व्यवहारमा नभएको अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीज्यू ! अझै केही भएको छैन भन्ने छ भने जिल्ला प्रहरीको प्रमुखलाई सोध्नुहोस्, सबै थाहा पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशको सम्मानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुहोस्, अन्यथा....।’
भदौ ११ गतेदेखि एमालेको भ्रातृ संस्था युवा संघ र अनेरास्ववियुले मन्त्री शाहीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । आइतबार युवा संघ र अनेरास्ववियुले मन्त्रीको राजीनामा माग्दै ¥याली र मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरे । दुवै संगठनले मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार र पीडित पक्ष दुवैलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो भनाइ राखे । उनले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग गर । साथै उनले सरकार, पीडित भनिएकी महिला र घटना बाहिर ल्याउने पत्रकारलाई सुझावसहित घटनाको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
आरोप लागिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनु र पदबाट राजीनामा दिनु मन्त्रीको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । तर, मन्त्री शाहीले आफूमाथिको आरोपमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
‘बलात्कारको आरोप गलत हो । एमालेले यसलाई राजनीतिक घटना बनाउन खोज्यो,’ बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैै मन्त्री शाहीले भने, ‘यदि मैले अपराध गरेको भए त कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हो, किन भएन ?’
एमालेका भ्रातृ संगठनले जुलुस निकालेर यसलाई राजनीतिकरण गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘बलात्कार गरेको भनेर सार्वजनिक भएको भिडियोलाई ल्याबमा टेस्ट गरौं, ल्याबबाट प्रमाणित भएमा मात्र त्यसको आधारमा दोषी–निर्दोषी भनौं ।’ उनले उक्त भिडियो ‘फेक’ भएको दाबीसमेत गरे ।
प्रदेश सरकार के भन्छ ?
आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घटना सत्य भए पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गरिने बताए । ‘हामी न्यायको पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘घटनासँग जोडिएका व्यक्तिसँग प्रशासनले छलफल गर्ला । अपराधीलाई सरकारले जोगाउँदैन, न्याय दिलाउँदा एक÷दुई दिन ढिला हुन सक्छ, आत्तिनुहुँदैन ।’
सोही दिन सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म सरकारले यसबारे केही गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘पीडित भनिएको पक्षले प्रशासनमा उजुर गर्ने प्रक्रिया भएको देखिँदैन । पीडित भनिएकी महिलाले सामाजिक सञ्जालमै मेरो चरित्र हत्या गरियो भनेर भन्नुभएको छ । सत्यतथ्य के हो ? त्यो विषय सरकारसमक्ष आइपुगेको छैन ।’
प्रहरी भन्छ– उजुरी नै परेको छैन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले अहिलेसम्म प्रहरीसमक्ष यस प्रकारको कुनै उजुरी, निवेदन नआएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीकहाँ जाहेरी, उजुरी केही आएपछि बल्ल हेर्ने हो । बाहिर बजारमा के आउँछन् । त्यो सरोकारको विषय भएन ।’
केही समय पहिला यस्तो यस्तो कुरा भएको रहेछ भनेर केही व्यक्ति प्रहरी कार्यालयमा आएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामीले यदि त्यस्तो भएको छ भने निवेदन, जाहेरी के छ, लिएर आउनुहोस् भनेका थियौँ । त्यसपछि त उहाँहरु फर्किनु नै भएन ।’
सम्बन्धित निकायमा गएर अन्याय भयो भनेपछि छानबिन हुने तर त्यस्तो उजुरी वा जाहेरी नै नआएको अवस्थामा आफूहरुले केही गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
मानवअधिकारकर्मी के भन्छन् ?
इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदी यो घटनालाई आफूहरुले पनि विश्लेषण गरिरहेको बताउँछन् ।
‘घटना नै अन्योलपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा एउटा कुरा आयो, अहिले फरक कुरा आएको छ । वास्तविक कुरा के हो भन्ने प्रष्ट छैन ।’ यसबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग पनि आफूहरुले समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।
‘यदि घटनामा संलग्न हो भने कारबाही हुनुपर्छ । मन्त्री दोषी हुन् भने कारबाही हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘यदि दुवैले होइन भनेको अवस्थामा घटना बाहिर ल्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीलाई रिहा गर्न एमालेको माग